Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Khasaare Balaadhan Gaystay oo Muqdisho Ka Dhacay.
Qarax Khasaare Balaadhan Gaystay oo Muqdisho Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ July 15, 2018
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay weerar shalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo hoteel halkaa ku yaalla oo ay inta badan madaxda dawladdu tagaan. Shan ka mid ah dadka dhintay waxaa la sheegay inay ahaayeen dableydii weerarka qaadday.
Kooxda Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarradaas oo loo adeegsaday laba gaari oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa, kuwaasoo lala beegsaday bar koontarool oo madaxtooyada laga ilaaliyo iyo hotelka SYL.
Qaraxyada ayaa waxaa xigay rasaas xooggan oo ay is dhaafsadeen dableydii weerarka qaadday iyo ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya kama aysan hadlin weerarka, hase yeeshee wakaaladda wararka SONNA ee ku hadasha afka dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidanka amnigu ay “ka hortageen qaraxyo argagixiso”.
Weerarradan oo kuwa noocooda oo kale ah lagu qaaday xarunta Otto Otto todobad ka hor, ayey dadku is waydiinayaan sida ay uga dheceen xarumaha dawladda, ayadoo aad loo adkeeyey amniga iyo isu socodka gaadiidka ee Muqdisho, gaar ahaan meelaha ay ku yaallaan xarumaha dawladda ee aadka loo ilaaliyo.